Khilaafka Madaxda Dowladda oo laga cabsi qabo in uu Saameeyo Safaaraadaha Soomaaliya - iftineducation.com
iftineducation.com – Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibada iyo Dhiiri gelinta Soomaaliya Mudane Buuri Maxamed Xamse ayaa ka hadlay khilaafka madaxda dowladda federaalka u dhaxeeya ee saamaynta ku yeeshey xildhibaanada Baarlamaanka ayaa ka digey in khilaafku saameeyo safaaradaha dibada ee Soomaaliya.
Wasiiru Dowlahu waxa uu fariin u diray dhamaan shaqaalaha ka howl gala safaaradaha ka duwan ee dalka dibadiisa isagoo si khaas ula hadlay Safiirada, Agaasimayaaasha wasaarada, waaxyada maamulaha hoose ee la xiriira shaqada oo ku booriyey in ay shaqada ay u hayaan shacabka ka soo ka dhexgalin khilaafka madaxda dowladda federaalka.
“waxaad tihiin shaqaale joogta ah oo u xilsaaran hagidda howlaha qaranka ee dibadda , waxaa la idinka doonayaa inaad fududeysaan adeegyada iyo iskaashiga idinkala dhaxeeya Wasaaradaha kala duwan ee dowladda , Xafiisyada Ururada , hey’adaha iyo Safaaradaha shisheeye ee ka furan dalka Soomaaliya” ayuu ku yiri war uu soo saaray wasiiru dowlaha Arrimaha dibada Soomaaliya.
Khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaara ayaa gaaray meel aad u sarayso iyadoo soo shaac bixida khilaafkan laga joogo muddo ku dhow bil ilaa hadana xal laga gaarin, Wuxuuna saamayn ku yeeshay Golaha Baarlamaanka, Wasiirada.
Daawo Dabagalkii Ganacsade Muse Ganjab oo meel xasaasiya gaaray iyo Madaxweyne Garguurte oo iska inkiray – “France 24 TV Interview”